Umdlali weChiefs usefakwe enkantolo ngumphathi wakhe | News24
Umdlali weChiefs usefakwe enkantolo ngumphathi wakhe
Cape Town – Sekusabalale imibiko yokuthi umgadli weKaizer Chiefs, u-Edward Manqele, usefakwe enkantolo yilowo owayengumphathi wakhe, uJosiah Mphono.
Kusolwa ukuthi uManqele kanye noMphono bebelokhu benomdonsiswano osudonse isikhathi eside, njengoba lo owayengumphathi wakhe ethi ukweletwa imali yilo mdlali weChiefs.
“Inkinga phakathi kwethu kanye nalo mfana (uManqele) imayelana nokuphulwa kwenkontileka. Sasinenkontileka ayiphula futhi, manje, ngendlela izinto eziyiyona, kubukeka engathi silwa naye,” uMphono utshele iSoccer Laduma.
“Sakhonjiswa ukuthi uhola malini kanye nobude benkontileka yakhe. Kwaba ngemumva kwalokho, ukuthi inani okwakumele asikhokhele lona lanqunywa khona. Sonke savumelana ukuthi wayezosikhokhela izikhawu ezimbili.
“Wakhokha isitolimende sakhe sokuqala ngomhlaka-28 kuJanuwari njengokwesivumelwano kanti isitolimende sesibili kwakufanele sikhokhwe ngoJulayi, kodwa wahluleka ukukhokha. Watshela ummeli wami ukuthi ube nezinkinga ngemoto yakhe nokuthi inkampani yomshwalense yayingayikhokheli, ngakho wayesebenzisa imali ukulungisa imoto yakhe.”
Lo mdlali oneminyaka engu-29 ubudala usedlale imidlalo engu-22 wase washaya igoli elilodwa kulesi sikhathi selokhu afika eNaturena.